अवसर खोज्दै भाइबर- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
अवसर खोज्दै भाइबर
कार्तिक १, २०७६ विजय तिमल्सिना
फेसबुकको आफ्नै च्याट गर्ने एप छ, म्यासेन्जर । फेसबुककै अर्को म्यासेजिङ एप छ, ह्वाट्सएप । फेसबुक स्वामित्वको इन्स्टाग्राममा पनि प्रयोगकर्ताले च्याट गर्न मिल्ने सुविधा छ । अहिले सामान्य स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि च्याट, भिडियो च्याट गर्न धेरै विकल्प छन् । यी विकल्पमा प्रयोगकर्ताले कसलाई रोज्लान् ?
फेसबुकजस्तो धेरै प्रयोगकर्ताको पहुँच भएको सेवालाई प्रयोगकर्ताले रोज्लान् वा भाइबरजस्तो विशुद्ध म्यासेजिङ एपलाई प्रयोग गर्न रुचाउलान् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै भााइबरजस्ता कम्पनीका लागि चुनौती हो । भाइबरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमैल अगाउवा भने सहजै जवाफ दिन्छन्, ‘अन्य देशमा एक जना प्रयोगकर्ताले औसत ३ वटा म्यासेजिङ एप प्रयोग गर्छन् तर दक्षिण एसियाली प्रयोगकर्ता भने औसत ५ वटा एप चलाउँछन् । प्रयोगकर्ताको रोजाइमा हामी पनि पर्छौं ।’
उनका अनुसार फेसबुकजस्ता ठूला कम्पनीका प्रयोगकर्ता भए पनि भाइबरजस्ता म्यासेजिङ एपका आफ्नै विशेषता छन्, जसलाई प्रयोगकर्ताले छाड्न चाहन्नन् । भाइबरको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के हो ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमैल भाइबर अन्य एपको तुलनामा सबैभन्दा छिटो भएको दाबी गर्छन् । व्यक्तिगत रूपमा भाइबरबारे उनलाई मन पर्ने विशेषता पनि यही हो ।
यसबाहेक भाइबरको अर्को विशेषता गोपनीयता भएको जमैलको दाबी छ । भाइबरले डिफल्ट रूपमै आफ्नो एपमा इन्ड टु इन्ड इन्स्क्रिप्सन राखेको छ, जसका कारण एक प्रयोगकर्ताले पठाएको म्यासेज अर्को डिभाइसमा नभई बीचमा कसैले पढ्न वा ह्याक गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । भाइबरले इन्स्क्रिप्सनलाई डिफल्ट बनाएको भए पनि चलनचल्तीमा रहेका अन्य धेरै एपले यो फिचर प्रयोगका लागि विकल्प छाडेका छन् । त्यसैले पनि भाइबर अन्य एपको तुलनामा फरक रहेको दाबी जमैलको छ ।
सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि भाइबर म्यासेज गर्ने एप मात्रै हो । कर्पोरेट हाउस वा कम्पनीका लागि भने भाइबर व्यवसाय साझेदार पनि हो । नेपालमा पनि भाइबरले केही कर्पोरेट हाउससँग सहकार्य गरिरहेको छ । नेपालमा भाइबर बैंकिङ होस् वा कर्पोरेट हाउससँग ‘भाइबर कम्युनिटी’ निर्माणको साझेदारी भाइबरले यसलाई व्यावसायिक रूप दिने प्रयास जारी राखेको छ । ‘यस्ता व्यावसायिक सहकार्यले प्रयोगकर्तासँग पैसा नलिई पनि कम्पनी सञ्चालनमा सहयोग पुग्छ,’ जमैल भन्छन्, ‘आखिर अहिले पैसा तिरेर च्याट गर भन्दा कसले गर्छ र ?’
भाइबरले धेरै जनसंख्या भएको अन्य देशको तुलनामा नेपालमा किन आफ्नो बजार र प्रभाव विस्तारका लागि ध्यान दिइरहेको छ ? ‘नेपालजस्तो धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक भएको देशका लागि भाइबर आफ्नो घरजस्तो हो,’ जमैल भन्छन्, ‘यसले नेपालमा रहेका र बाहिर रहेका मानिसबीच सम्पर्क स्थापित गराउन भूमिका खेलेको छ ।’
भाइबरले आफ्नो प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राखे पनि आम्दानीका लागि भने नयाँ बिजनेस मोडल स्थापित गरिरहेको जमैलको तर्क छ । ‘तर भाइबर प्रयोगकर्तामै केन्द्रित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कर्पोरेट हाउससँग व्यावसायिक रूपमा काम गरेर आम्दानीको मोडेल पहिल्याउँदै छौं ।’ यही प्रयासको परिणामस्वरूप भाइबर यो वर्षदेखि आफ्नो खर्च धान्न सक्ने गरी सक्षम भएको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो आम्दानीको करिब आधा हिस्सा कर्पोरेटसँगको साझेदारीमार्फत आउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले बनाएको कम्युनिटीबाट पनि ब्रान्ड र सेलेब्रिटीले धेरै मानिससँग सञ्चार गर्न सक्छन् ।’ संसारभरका टेलिकम कम्पनीहरूले इन्टरनेटमार्फत् निःशुल्क कल र म्यासेजको सुविधा दिने भाइबरजस्ता एपले आफ्नो आम्दानी घटाएको आरोप लगाइरहेका छन् । टेलिकम कम्पनीबाट सोझै कल गर्दा सञ्चार सम्पर्क महँगो हुने भएकाले प्रयोगकर्ताले भाइबरजस्ता एपलाई रोजेको उनको बुझाइ छ । ‘तर हामी टेलिकम कम्पनीका दुश्मन होइनौं,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै टेलिकम सेवा प्रदायक हामीसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन् ।’
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ११:४३